မဲဇလီဖူးက တကယျပဲ ဆေးပေါငျးခသလား..ဆေးပေါငျးခတဲ့ မဲဇလီဖူးသုတျ ဘယျလို လုပျကွမလဲ – Askstyle
မဲဇလီဖူးက တကယျပဲ ဆေးပေါငျးခသလား..ဆေးပေါငျးခတဲ့ မဲဇလီဖူးသုတျ ဘယျလို လုပျကွမလဲ
မဲဇလီ ဖူးသုပျကို ဆေးဖကျ ဝငျတဲ့ အစာအဖွဈ ဆေးပေါငျးခတဲ့ တနျဆောငျ မုနျးလပွညျ့နမှေ့ာ စားလရှေိ့ကွပါတယျ။
မဲဇလီဖူးဟာ တကယျပဲ ကနျြးမာရေးအတှကျ အထောကျအကူပွုသလားဆိုတာကတော့ စဉျးစားစရာပါ။
ကဲ ဒါဆို မယျဇလီဖူးကို စနဈတကြ လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ. . .
မဲဇလီဖူးမှာ ရဓောတျ၊ ဂလူးကိုဆိုကျ၊ ကတျသတဈအကျစဈ၊ အနျသရိုကှီနုနျး၊ ကမျဖီရောစတဲ့ ပစ်စညျးတှပေါဝငျတာကွောငျ့ ဆေးဖကျဝငျ
တဲ့ အပငျထှကျပစ်စညျးအနနေဲ့ စားသုံးကွတာဖွဈပါတယျ။
မဲဇလီဖူး မှာ အောကျပါ အကြိုးကြေးဇူးတှရှေိကွောငျး သိရပါတယျ။
အစာအိမျ အူလမျးကွောငျးကို ကနျြးမာစပေါတယျ
မဲဇလီဖူးကို ရောဂါကငျးရှငျးစတေဲ့ အစှမျးရှိတယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။
အကွောငျးကတော့ အနျသရာကှီနုနျး ပမာဏမြားစှာ ပါဝငျပွီး ဝမျးခြုပျတာ၊ သှေးထှကျတာနဲ့ အကျစဈဆနျတကျပွီး ရငျပူတာတို့လို အစာခွေ အူလမျးကွောငျးဆိုငျရာ ရောဂါတှကေို ဆနျ့ကငျြရာမှာ အဓိက အသုံးဝငျပါတယျ။
မဲဇလီဖူးဟာ အူတှကေို သနျ့စငျ စပွေီး အူမကွီးရဲ့ လှုပျရှားမှုကို ကောငျး မှနျစေ
တာကွောငျ့ ဝမျးပြော့ပြော့သှား စတေဲ့ အာနိသငျရှိပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ အူလမျးကွောငျးရှိ တုတျကောငျတှကေို ဖယျရှားပေးတဲ့ အစှမျးလညျး ရှိပါတယျ။
ပြို့ခငျြ အနျခငျြတာကို သကျသာစပေါတယျ
မဲဇလီဖူးကို အနညျးငယျစားပေးရငျ ပြို့ခငျြအနျခငျြဖွဈတာကို သကျသာစပေါ တယျ။
ကိုယျခံ စှမျးအား စနဈကို ကောငျးမှနျစပေါတယျ။
မဲဇလီဖူးကို စားတာကွောငျ့ သရကျရှကျထဲမှာ ဆဲလျအသဈမြားမြားဖွဈအောငျ လှုံ့ဆျောပေးနိုငျတဲ့အတှကျ ဆေးဖကျဝငျ
ရောဂါကို တှနျး လှနျနိုငျတဲ့ အစှမျးရှိတာကို အသေးစိတျ လလေ့ာမှုတှေ
ဆကျလကျပွုလုပျနကွေပွီး ကာကှယျဆေးအဖွဈ တှဲဖကျသုံးဖို့ဖွဈနိုငျခွေ ရှိ၊ မရှိ စဉျးစားနကွေပါတယျ။
ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြနိုငျတဲ့ အငျတီအောကျဆီးဒငျ့ ဂုဏျသတ်တိ ရှိပါတယျ။
မဲဇလီဖူးမှာ အစှမျးထကျ အငျတီအောကျဆီးဒငျ့ ပါဝငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဖရီးရယျဒီကယျကွောငျ့ ဆဲလျထိခိုကျမှု မဖွဈအောငျ ကာကှယျပေးနိုငျသလို အသညျးမှာ ထိခိုကျမှု မဖွဈအောငျလညျး ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ လူတှမှော ဘယျလောကျအထိ အသုံးဝငျ ထိရောကျမှု ရှိသလဲဆိုတာကို နောကျထပျ လလေ့ာမှုတှေ ထပျလုပျဖို့ လိုအပျနပေါသေးတယျ။
လလေ့ာမှုတှအေရ မဲဇလီဖူးမှာ Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa နဲ့ Proteus. vulgaris စတဲ့ ပိုးတှကေို တှနျးလှနျပေးနိုငျတဲ့အစှမျးရှိကွောငျး ဆိုပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ဖနျးဂပျဈမှိုတှကေိုတော့ တှနျးလှနျ နိုငျတယျလို့ မပွသထားပါဘူး။
အူမကွီးကငျဆာ ဖွဈနိုငျခွကေို လြော့ကြ စပေါတယျ။
မဲဇလီဖူးဟာ ဖရီးရယျဒီကယျတှကွေောငျ့ ဆဲလျထိခိုကျမှု မဖွဈအောငျ ကာကှယျပေးတဲ့
ဆေးဖကျဝငျ အပငျတဈမြိုး ဖွဈတဲ့အတှကျ အူမကွီးကငျဆာနဲ့ အစာဟောငျးအိမျကငျဆာ ဖွဈနိုငျခွကေို လြော့ကစြနေိုငျပါတယျ။
ကဲ တနျဆောငျမုနျးလပွညျ့နရေ့ောကျရငျတော့ မဲဇလီဖူးသုပျ စားဖွဈအောငျစားဖို့ မမနေဲ့နျော. . .
ဆေးပေါငျးခတဲ့ မဲဇလီဖူးသုတျ ဘယျလို လုပျကွမလဲ
တနျဆောငျတိုငျလညျးရောကျတော့မယျဆိုတော့ လပွညျ့ညမှာ လုပျစားဖို့ ဆေးဖကျဝငျတဲ့ မဲဇလီဖူးသုတျ လုပျပုံလုပျနညျးလေး ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
မဲဇလီပငျဟာ မွနျမာနိုငျငံ အနှံ့အပွားမှာ ပေါကျနိုငျတဲ့ ဆိုဒျအလယျအလတျရှိတဲ့ သဘာဝပေါကျပငျတဈမြိုး ဖွဈပါတယျ။ မဲဇလီပငျရဲ့ အရှကျ၊ အဖူးတှဟော အနညျးငယျခါးတဲ့အရသာရှိပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံ မှာ လူတှေ တျောတျောမြားမြား ယုံကွညျကွတာက မဲဇလီ ပငျဟာ ဆေးဖကျဝငျပွီး စိတျဖိအားတှေ ၊ အိပျမပြျောတာတှေ၊ စိတျမငွိမျမသကျဖွဈတာတှကေိုလြှော့ခပြေးနိုငျပါတယျတဲ့။ ရုက်ခဗဒေဆိုငျရာအချေါအရ မဲဇလီပငျရဲ့အမညျက Cassia Siamea (ကာစီးရား စမီးရား) ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာလူမြိုးတှကေ မဲဇလီအရှကျနဲ့ အပှငျ့၊အဖူးတှကေို ဟငျးခကျြလရှေိ့ပါတယျ။ အခုဖျောပွပေးမှာကတော့ မဲဇလီဖူးသုတျပါ။
မဲဇလီဖူး အနညျးငယျခနျ့ (အနတေျော ၈ခကျခနျ့)
ကွကျသှနျဖွူကို ဆီသတျထားတဲ့ဆီ ၃ဇှနျးခနျ့ (ကွကျသှနျဖွူအဖတျကလေးတှပေါ ထညျ့ရနျ)
မဲဇလီဖူးကို ရနှေေးဖွငျ့ ငါးမိနဈခနျ့ ပွုတျပါ။ ပွီးရငျရစေဈပွီး ငရုတျဆုံထဲ ထညျ့ထောငျးပါ။
ကွကျသှနျနီကို ပါးပါးလေးတှလှေီးပွီး ရဆေေး၊ ရစေဈထားပါ။
ကွကျသှနျဖွူကို အဝိုငျးလေးတှလှေီးပွီး အသငျ့ကွျောထားပါ။
ပွီးရငျတော့ ဇလုံတဈခုထဲမှာ ခုနက ထောငျးထားတဲ့ မဲဇလီဖူးတှရေယျ၊ ကွကျသှနျနီ၊ ပုဇှနျခွောကျမှုနျ့ ၊ ပဲမှုနျ့၊ ငံပွာရညျ၊ သံပုရာရညျ၊ ကွကျသှနျနီ ဆီသပျထားတာတှကေို တဈခါတညျးရောနယျပွီး နှမျးဖွူးပေးပါ ။ (နှမျးကို ရောနှယျလို့လညျးရပါတယျ) အရသာ အငံ၊ အပေါ့အတှကျကတော့ လိုသလို ပွငျဆငျလို့ရပါတယျ။ မဲဇလီဖူး သုပျလေးကို နလေ့ညျနခေ့ငျး ရနှေေးပူပူလေးနဲ့ သုံးဆောငျနိုငျသလို ရိုးရာအရ တနျဆောငျတိုငျ လပွညျ့ည မှာလညျး သုံးဆောငျနိုငျပါသေးတယျ။
Credit : We Media & Doe Mal
မဲဇလီ ဖူးသုပ်ကို ဆေးဖက် ဝင်တဲ့ အစာအဖြစ် ဆေးပေါင်းခတဲ့ တန်ဆောင် မုန်းလပြည့်နေ့မှာ စားလေ့ရှိကြပါတယ်။
မဲဇလီဖူးဟာ တကယ်ပဲ ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုသလားဆိုတာကတော့ စဉ်းစားစရာပါ။
ကဲ ဒါဆို မယ်ဇလီဖူးကို စနစ်တကျ လေ့လာကြည့်ရအောင်. . .
မဲဇလီဖူးမှာ ရေဓာတ်၊ ဂလူးကိုဆိုက်၊ ကတ်သတစ်အက်စစ်၊ အန်သရိုကွီနုန်း၊ ကမ်ဖီရောစတဲ့ ပစ္စည်းတွေပါဝင်တာကြောင့် ဆေးဖက်ဝင်
တဲ့ အပင်ထွက်ပစ္စည်းအနေနဲ့ စားသုံးကြတာဖြစ်ပါတယ်။
မဲဇလီဖူး မှာ အောက်ပါ အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
မဲဇလီဖူးကို ရောဂါကင်းရှင်းစေတဲ့ အစွမ်းရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
အကြောင်းကတော့ အန်သရာကွီနုန်း ပမာဏများစွာ ပါဝင်ပြီး ဝမ်းချုပ်တာ၊ သွေးထွက်တာနဲ့ အက်စစ်ဆန်တက်ပြီး ရင်ပူတာတို့လို အစာခြေ အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေကို ဆန့်ကျင်ရာမှာ အဓိက အသုံးဝင်ပါတယ်။
မဲဇလီဖူးဟာ အူတွေကို သန့်စင် စေပြီး အူမကြီးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ကောင်း မွန်စေ
တာကြောင့် ဝမ်းပျော့ပျော့သွား စေတဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အူလမ်းကြောင်းရှိ တုတ်ကောင်တွေကို ဖယ်ရှားပေးတဲ့ အစွမ်းလည်း ရှိပါတယ်။
ပျို့ချင် အန်ချင်တာကို သက်သာစေပါတယ်
ကိုယ်ခံ စွမ်းအား စနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
မဲဇလီဖူးကို စားတာကြောင့် သရက်ရွက်ထဲမှာ ဆဲလ်အသစ်များများဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဆေးဖက်ဝင်
ရောဂါကို တွန်း လှန်နိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိတာကို အသေးစိတ် လေ့လာမှုတွေ
ဆက်လက်ပြုလုပ်နေကြပြီး ကာကွယ်ဆေးအဖြစ် တွဲဖက်သုံးဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိ၊ မရှိ စဉ်းစားနေကြပါတယ်။
ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်နိုင်တဲ့ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် ဂုဏ်သတ္တိ ရှိပါတယ်။
မဲဇလီဖူးမှာ အစွမ်းထက် အင်တီအောက်ဆီးဒင့် ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဖရီးရယ်ဒီကယ်ကြောင့် ဆဲလ်ထိခိုက်မှု မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို အသည်းမှာ ထိခိုက်မှု မဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လူတွေမှာ ဘယ်လောက်အထိ အသုံးဝင် ထိရောက်မှု ရှိသလဲဆိုတာကို နောက်ထပ် လေ့လာမှုတွေ ထပ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေပါသေးတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ မဲဇလီဖူးမှာ Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa နဲ့ Proteus. vulgaris စတဲ့ ပိုးတွေကို တွန်းလှန်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဖန်းဂပ်စ်မှိုတွေကိုတော့ တွန်းလှန် နိုင်တယ်လို့ မပြသထားပါဘူး။
အူမကြီးကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျ စေပါတယ်။
မဲဇလီဖူးဟာ ဖရီးရယ်ဒီကယ်တွေကြောင့် ဆဲလ်ထိခိုက်မှု မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးတဲ့
ဆေးဖက်ဝင် အပင်တစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့အတွက် အူမကြီးကင်ဆာနဲ့ အစာဟောင်းအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
ကဲ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ရောက်ရင်တော့ မဲဇလီဖူးသုပ် စားဖြစ်အောင်စားဖို့ မမေ့နဲ့နော်. . .
တန်ဆောင်တိုင်လည်းရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ လပြည့်ညမှာ လုပ်စားဖို့ ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ မဲဇလီဖူးသုတ် လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မဲဇလီပင်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားမှာ ပေါက်နိုင်တဲ့ ဆိုဒ်အလယ်အလတ်ရှိတဲ့ သဘာဝပေါက်ပင်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ မဲဇလီပင်ရဲ့ အရွက်၊ အဖူးတွေဟာ အနည်းငယ်ခါးတဲ့အရသာရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ လူတွေ တော်တော်များများ ယုံကြည်ကြတာက မဲဇလီ ပင်ဟာ ဆေးဖက်ဝင်ပြီး စိတ်ဖိအားတွေ ၊ အိပ်မပျော်တာတွေ၊ စိတ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်တာတွေကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာအခေါ်အရ မဲဇလီပင်ရဲ့အမည်က Cassia Siamea (ကာစီးရား စမီးရား) ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုးတွေက မဲဇလီအရွက်နဲ့ အပွင့်၊အဖူးတွေကို ဟင်းချက်လေ့ရှိပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ မဲဇလီဖူးသုတ်ပါ။
မဲဇလီဖူး အနည်းငယ်ခန့် (အနေတော် ၈ခက်ခန့်)
ကြက်သွန်ဖြူကို ဆီသတ်ထားတဲ့ဆီ ၃ဇွန်းခန့် (ကြက်သွန်ဖြူအဖတ်ကလေးတွေပါ ထည့်ရန်)
မဲဇလီဖူးကို ရေနွေးဖြင့် ငါးမိနစ်ခန့် ပြုတ်ပါ။ ပြီးရင်ရေစစ်ပြီး ငရုတ်ဆုံထဲ ထည့်ထောင်းပါ။
ကြက်သွန်ဖြူကို အဝိုင်းလေးတွေလှီးပြီး အသင့်ကြော်ထားပါ။
ပြီးရင်တော့ ဇလုံတစ်ခုထဲမှာ ခုနက ထောင်းထားတဲ့ မဲဇလီဖူးတွေရယ်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် ၊ ပဲမှုန့်၊ ငံပြာရည်၊ သံပုရာရည်၊ ကြက်သွန်နီ ဆီသပ်ထားတာတွေကို တစ်ခါတည်းရောနယ်ပြီး နှမ်းဖြူးပေးပါ ။ (နှမ်းကို ရောနှယ်လို့လည်းရပါတယ်) အရသာ အငံ၊ အပေါ့အတွက်ကတော့ လိုသလို ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်။ မဲဇလီဖူး သုပ်လေးကို နေ့လည်နေ့ခင်း ရေနွေးပူပူလေးနဲ့ သုံးဆောင်နိုင်သလို ရိုးရာအရ တန်ဆောင်တိုင် လပြည့်ည မှာလည်း သုံးဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်။